Igwe anaghị agba nchara Ball, Ball valvụ, Valves Nkedo - Shineway
Igwe anaghị agba bọọlụ
Igwe anaghị agba nchara valvụ Ball
Bọọlụ Nchara Valve
Anyị na ngwaahịa nwere 3 isi efere, okirikiri, bọl valves, na oge ọgbụgba. Bọọlụ anyị bụ bọọlụ oghere na bọọlụ siri ike. Bọọlụ valvụ bụ ọkachasị igwe anaghị agba nchara flange. Nkedo bụ silica sol casting usoro.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 20 nke okirikiri mmepụta ahụmahụ. Bọọlụ anyị gụnyere bọọlụ na-ese n’elu mmiri, bọọlụ edoziri, bọọlụ oghere na bọọlụ siri ike. Ihe ndi a bu A105, F304, F316, F304L, F316L, ALLOY STEE na ihe ndi ozo
Ngwurugwu bọọlụ anyị na-eji nkedo nke anyị na bọọlụ iji chịkwaa ngwaahịa a. Ngwunye anyị valvụ bụ tumadi flanged bọl valves. Nrụgide bụ 150LB, 300LB, 600LB, JIS 5K, JIS 10 na na.
Anyị oge ọgbụgba na-mere nke silica Sol mgbatị usoro na enwekwa anya. Ngwaahịa na-ere nke ọma n'ụlọ na mba ọzọ, enwere ike ịmepụta ya dịka eserese ndị ahịa.
Ntọala Ndị Ahịa
Companylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ 20 na-arụ ọrụ na ntanetị, ma nwee ike hazie ngwaahịa dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Zhejiang Shineway Industry Limited. hiwere na 2000. companylọ ọrụ ahụ dị ugbu a na Longwan Binhai Park (nke dị nso n'ọdụ ụgbọ elu), nke nwere aha ọma nke "China Valve City", yana ngụkọta nke square mita 15,000. Anyị ụlọ ọrụ nwere atọ onwe ụlọ mmepụta ihe na: bọl factory, foundry, bọl valvụ factory. Companylọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ na-ere ọkụ ọkụ na-ere ọkụ oge niile, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ valvụ, na ụlọ nyocha dị iche iche. Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na ụkpụrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, onye ahịa mbụ". Elu àgwà, ala price, zuru okè mgbe-sales ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ na-enye ndị ọrụ nnukwu ngwaahịa na ngwaahịa ruru eru. Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ mpaghara, ihe nkedo, bọọlụ bọọlụ na ihe ndị ọzọ.
Bọọlụ Trunnion Ball
Igwe akara nke igwe anaghị agba nchara nwere valvụ ọnụ ụzọ yiri, na elu nke valvụ azuokokoosisi bụ peroxidized, n'ihi ya, ọ nwere ihe magburu onwe corrosion eguzogide ma na-dịtụ eyi -eguzogide. Igwe anaghị agba nchara ọnụ ụzọ ámá valvụ nwere ike họrọ dị iche iche piping, iji gboo mkpa nke bụghị ...
Ngwunye bọọlụ siri ike bụ oghere na mmechi bọlbụ nke bọọlụ GM, kwadebere ya dị iche iche dị elu, nrụgide dị elu na bọọlụ na-eguzogide ọgwụ. -Cr-W C na W surfacing alloy nwere kasị ala ike na bụ otu n'ime ndị kasị mma. Ọ na-eguzogide oyi na ikpo ọkụ, ...
Iji hụ na arụmọrụ akara nke igwe anaghị agba nchara bọọlụ mgbe nrụgide na-arụ ọrụ dị ala, a ga-akpụrịrị nrụgide nrụgide tupu bọọlụ na oche akara ahụ. Na isiike akara oche, ntụkwasị obi na ọrụ ndụ nke igwe anaghị agba nchara bọl v ...
Bọọlụ nke Ball Valve